ယတြာကောင်းသော ဂေဇက်ရွာ ဗေဒင်ဆရာ တေတေဇက်(၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ယတြာကောင်းသော ဂေဇက်ရွာ ဗေဒင်ဆရာ တေတေဇက်(၁)
ယတြာကောင်းသော ဂေဇက်ရွာ ဗေဒင်ဆရာ တေတေဇက်(၁)
- silver hero
Posted by silver hero on May 23, 2012 in Copy/Paste | 18 comments
´´လိုတာမရလို့၊ ငိုကာချမယ့် ပျိုကညာနှမရေ
အကိုတေတေဇက်က လိုတာရစေမယ်လို့တော့ မဆိုပါဘူး
ဂျိုကာလေးပြလို့ ခဏတာလေးတော့ ပျော်ရွှင်စေမယ်လေ´´
ကျွန်ှပ်တို့မြို့မှာ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင် အသစ်ဖွင့်တယ်၊ ပိုင်ရှင်ကတော့ မြို့ခံပေါ့၊ဒါပေမယ့်ညှပ်တဲ့ပညာရှင်ကို ရန်ကုန်မြို့ပေါ် အလှဖန်တီးရှင်တစ်ယောက် ပညာကြေးပေးခေါ်ရတယ်ပေါ့၊ မြို့လေးကလည်းနယ်မြို့လေးဆိုတော့ အသစ်အဆန်းကိုစပ်စုချင်ကြတယ်လေ။ ဆိုင်လေးစဖွင့်တော့ ဆံပင်ညှပ်တဲ.သူ၊ဆံပင်ဖြောင့်တဲ့သူ၊ အလှအပကြိုက်တဲ့သူဆိုတာ ကြိတ်ကြိတ်တိုးနေတာ ဆိုင်နာမည်လေးက ´´ မမတင် ဦးစီးသော အသစ်စတိုင်´´တဲ့ ပုရိသ ယောက်ျား ငနဲသားများကတော့ ဆံပင်ညှပ်ချင်တာ နည်းနည်း ပညာရှင် မိန်းမရှာအပေါင်းသူတော်ကောင်းကို စပ်စုချင်တာများများပေါ့။ ကျွန်ှပ် တေတေဇက်လည်း အများနည်းတူသိချင်သောကြောင့် သမာဓိမျက်နှာ၊ အိနြေရသော ခြေလှမ်းတို့ဖြင့် လူလစ်သောအချိန်ကို စောင့် လျှက် ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်အတွင်းသို့ ၀င်ခဲ့ရာ …အလို…တွေ့ပါပြီ အဆိုတော်နောနော် ရဲ့ ဆံပင်ပုံစံ ၊ မျက်နှာက လေးဖြူ မျက်နှာကျ ၊ နှာခေါင်းက ဂျက်မြသောင်း နှင့် လင်းလင်း ရောစပ်ထားသော နှာခေါင်း ၊ နှုတ်ခမ်းကျတော့ Bambino နှုတ်ခမ်း ဖြူဖြူကျော်သိန်း အသားရောင် ၊ ဆံပင်ညှပ်ရင်းပင်ပန်းတဲ့ ပုံစံနဲ့ Banbino နှုတ်ခမ်းမှ လေမှုတ်ထုတ်၇င်း ပြားခွပ်နေသော မျက်နှာမှ ချွေးတို့လက်နှင့်သပ်သပ်ထုတ်နေပုံမှာ သူ၏အလှဆုံးစတိုင်ပင်ဖြစ်နိုင်သည်။
နယ်မြို့လေးရောက်နေတဲ့ အလှဖန်တီးရှင်ဆိုတော့ စတိုင်အပြည့်နဲ့ပေါ့ ။ မိုးလင်းမိုးချုပ် ဆိုင်ထဲမှ ဆိုင်အပြင်မထွက်။ ကြည့်ရှုလိုက်ပါက လူတကာညည်းထွားသွားမည့် ရှုညည်းအလှပိုင်ရှင် နှင့် ကျွန်ှပ် ဇာတ်လမ်း ပက်သက်မိပုံက အနှီးအလှပိုင်ရှင် ကျွန်ှပ်တို့မြို့ရောက်ဂ်ျ 6လ 7လ အကြာတွင် ရှုညည်းထွားအလှပိုင်ရှင်သည် ကျွန်ှပ်ထံသို့ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် မဖိတ်ခေါ်ဘဲနှင့် ရောက်လာခဲ့လေသည်။
မတင်။ ။ ဆရာတေတေဇက်နှင့် တွေ့ချင်လို့ပါ၇ှင့်
ကျွန်ှပ်။ ။ ကျွန်တော်တေတေဇက်ပါ ဘာများအကူအညီပေးရမလဲ
မတင်။ ။ဆရာ ကျမနံမည် မတင် ပါ။အပြည့်အစုံက တင်နိုင်ဦး ပါ ဆရာ့ဆီ မှာ ဓါတ်ရိုက် ဓါတ်ဆင် ယတြာ လုပ်ချင်လို့ ပါ။ဖြစ်နိုင်ရင်အဲ့ဒီ့ကောင်ကိုအောက်လမ်းနည်းနဲ့ အသေသတ်လို့ ရရင်သတ်ချင်ပါတယ်ကျမကိုကူညီပါဆရာ
သုံးနှုန်းလိုက်သောအောက်လမ်းနည်းဆိုသောစကားကြောင့်ကျွန်ုပ်မှာစောစောစီးစီးကြက်သီးများပင်ဖြန်းဖြန်းထပြီးနဖူးမှချွေးများပင်ထွက်လာချေပြီ။ဗေဒင် မမေးဘဲနှင့် ယတြာ ဓါတ်ရိုက်ဓါတ်ဆင် တန်းလုပ်ချင်သော၊
ကျွန်ှပ် ။ ။ ကဲပါ နမ အဲ နှမ ခဏ လောက်ထိုင်ပါအုံး ၊ ကျွန်ှပ် နားလည်အောင် လည်း သေချာရှင်းပြပါအုံး။
တင်။ ။ ဒီလိုပါဆရာ ၊ ရန်ကုန် မှာ ကျွန်မ အမျိုးသား ရှိပါတယ်။ သူ့ အပေါ် ကျွန်မ အစစအရာရာလိုလေသေးမရှိ အောင်ထားပါတယ်။ ကျွန်မအခုနယ်ရောက်နေတုန်း ဒင်းက ဘယ်ကဟာမတွေနဲ့ ဘယ်လိုဂယက်ထနေလဲမသိဘူး ကျွန်မအပေါ် အရင်လိုမကြင်နာတော့ဘူး ၊ ရန်ကုန်ပြန်ရင်လည်း မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတယ် မတွေ့အောင်ရှောင်ပုန်းနေတယ် ၊ ဖုန်းဆက်လဲမကိုင် ၊ ဖုန်းလဲမခေါ် ဖြစ်နေတယ်။ သူကျွန်မဆီ ဖုန်းပြန်ဆက်သွယ်လိုက်တာနဲ့ ပြီးပါတယ်ဆရာရယ် အဲဒီအတွက် ကျွန်မကို ကူညီပါဆရာ။
Banbinoနှုတ်ခမ်းကိုမဲ့ ရွဲ့၇်ျ အငိုထူစွာဖြင့် ပြေနေသော သူ၏မျက်နှာ ပြားခွပ်ခွပ်ကြီးအား ကြည့် လိုက်ရာ လုံးလုံး ၊ ကြီးကြီး နှင့် ကောက်နေသော နှာခေါင်းဝမှ နှာရည်တို့သည် အပြွတ်အခဲလိုက်ဖြင့် ၀င်လိုက်ထွက်လိုက် ရှလွတ်ရှလွတ်ဖြင့် စိတ်မသက်သာစရာ အနေအထားဖြစ်နေသည်။
ကျွန်ှပ်။ ။ ကဲကဲ မတီ အဲ မတင် ငိုမနေနဲ့ တော့ ၊ ဒီလို ဖြစ်ရပ်မျိုးဆိုတာ အေးအေး ဆေးဆေး လုပ်ရတယ်ကွဲ့ ၊ အလျင်လိုလို့မရဘူး ၊ မတင်အတွက် အကောင်ဆုံးဖြစ်အောင် ကျွန်ှပ် စီစဉ်ပေးပါ့မယ်၊ အကူအညီ လည်းပေးပါ့မယ် ´´ ဟု ကျေနပ်အောင်ပြော၇်ျ ပြန်လွှတ်လိုက်ရသည်။
အနှီးရှုညည်းစရာ ကိုကိုမမ ပြန်သွားသောအခါ ကျွန်ှပ်မှာ စိတ်မသက်မသာဖြင့် လက်ဘက်ရည်ဆိုင်သို့ ထွက်ခဲ့လေတော့သည်။
About silver hero
silver hero has written 19 post in this Website..
View all posts by silver hero →
ကျွန်ပ် လည်း ယဒြာ လုပ်ချင်နေပါသည်။
ဆရာ ကမ်းဝေး မြန်မြန် အိမ်ထောင်ကျရန်
ဆရာ ဘလက်ချော မြန် မြန် စီးရီးထုတ်နိုင်အောင် ( သူက အဆိုကောင်းမို့ )
ကျွန်ပ် ဆရာနှင့်တွေ့မည်။ တုံကင်ယူရန် လိုမလို။
အခုလိုပြောပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူပါ။ဇာတ်လမ်းဆုံးတဲ့အခါကျရင် စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကကျနော်ကိုကောင်းကင်ဘုံပို့ ပေးမှာပါ။
မတင်အတွက် ချစ်သူအစားထိုးပေးမယ်လို့ စိတ်ကူးရင်တော့
ဂေဇက်က လူပျိုကြီးအူးဗိုက် နဲ့ ၊ လူပျိုကြီးနီဂမိ တို့ က လဲ ကူညီပေးနိုင်တဲ့အကြောင်း သတင်းကောင်းလေး ပေးခဲ့ပါတယ်ဗျား ။
ကိုပေကို လဲမေ့မထားပါနဲ့ ဗျို.့အနော်ကတော့ မပါဘူးနော်။
မပါဘူးဆိုတာ ပါပါရစေလို့ ပြောတာမှတ်လား..
ပါချင်ရင်တော့ အူးပေနဲ့အရင်ဖိုက်ရမယ်ဗျ..
အာ. ဘာလို့ ပါချင်ရမှာတုန်းဗျ အူးဗိုက်ရ။
နေပါအုံး. ဒါနဲ့ အူးဗိုက်က ဘာများသိနေလို့ လဲ။
ဖိန့် ပြမနေပါနဲ့ ဗျာ။
ကြည့်ကောင်းမယ့် ပွဲပဲ ..
နာရို့ကတော့ သူရို့ လင်လု .. အဲ .. မယားလု .. အဲ ဒါလည်း ဟုတ်သေးပါဘူး ..
ဟိုဟာလုတာ (ဒါပဲ ကောင်းတယ်) ဘေးနားက ထိုင်ကြည့်ရဦးမယ် ..
ရွာထဲက လူပျိုကြီးများ … ဟိုင်း … ယား …
ဒီဗေဒင်ဆြာ တော့ မတင် ကို ယောင်္ကျားနဲ.ပြန်ပေါင်းအောင် လုပ်ပေးနိုင်လို.ကတော့ နာမည်ကျော်ပြီဗျို….
မတင်မျက်နှာလေးကို အမွှန်းတင်ထားတာ ပီပြင်ပ မျက်စိထဲကို ဘယ်လိုပုံဖော်ရမယ့် အလှပဂေး လေးဖြစ်သွားတယ်…
စာအရေးသားက အရမ်းညက်ပြီး ဖတ်လို့ အရမ်းကောင်းပါတယ်ဗျို့ … ။
အခြောက်မပုံစံကိုလည်း မျက်စိထဲပုံဖော်ကြည့်မိပါတယ် .. နှာရည်တွေ ရှလွတ်ရှလွတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ .. ဘယ်တော့ … ဗေဒင်ဆြာဆီ စင်မလဲဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ … ရင်တမမဖြင့် .. ဖတ်သွားပါတယ်နော် … ။
သည် ကွန်မင့်သာ အူးဗိုက်မြင်ရင် ။ စာရေးသူတို့မြို့ နာမည် ဇွတ်မေးတော့မှာ အသေချာဘဲ။
အရေးအသားကောင်းလိုက်တာ။ ခောတ်သစ်ဗေဒင် စာရေးဆရာပါလားဗျို့။ နောက်ထပ်အပိုင်းတွေ ဖတ်ဖို့ စောင့်နေပါတယ်ဗျို့။
ဗဒင်.. အဲလေ .. ဗေဒင်ဆရာဂျီး ရဲ့ ပညာခန်းတွေ လာတော့မှာပေါ့နော်…
ဆက်ရန် ဆိုထားသမို့…ဆန့်ငံ့ငံ့ဂျီးဗျာ… အမြန်တင်ဆက်တော်မူပါ…။
သမာဓိမျက်နှာ၊ အိနြေရသော ခြေလှမ်းတို့ဖြင့်……….အဟိဟိမျက်စိထဲမြင်လိုက်တာက……….
ကောလိပ်ဂျင်နေ၀င်းကို ကျနော် တော်တော်သဘောကျသလို၊ မင်းသားကြီးတော်တော်များများရဲ့သမာဓိ နောက်ပိုး
ဇေဂက်က sliver ရေ..
ဇတ်လမ်းနဲ့ ကွန်မင့်ဖတ်ရတာစိတ်ရွှင်လန်းသွားလို့ 